Maitiro ekuzadzisa Zvikumbiro zvevashandi zvinochinja - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
mushandi wevashandi, Vashandi Management
Maitiro Ekusangana Nekuchinja Kwevashandi Zvinodikanwa
Kumhanyisa kambani hakusi "hapana munhu" bhizimisi. Muchokwadi, zvinotora "mumwe munhu" chaiye kumisa uye kugadzira sangano. Ehe, iwe uri chikamu chekambani zvisinei nekuti unoishandira here kana kuti ndeyayo. Zvisinei, simba chairo riri mumaoko evaya vanosarudza vashandi vekambani. Tiri kutaura nezvebazi rinoona nezvevashandi.
Ingoriwo basa sezvo riri simba. Izvi zvinodaro nekuti kushandira hakuna kuganhurirwa pakutsvaga vanhu. Vanhu vazhinji vanoita chikanganiso chekufunga ivo vari chinhu chimwe chete. Kuchengeta chinongova chikamu cheyakawandisa maitiro evashandi, zvakadaro.
Vashandi vanotanga nekusarudza vanhu kuti vashande kukambani uye vanoenderera chero vachishandira kambani. Nenzira iyi, dhipatimendi rinoongorora mhando yevanhu vanodikanwa nekambani, zvichingodaro.
Chinhu chinonyengera ndechekuti, vashandi havana kumbomira. Izvo, kune chikamu chikuru, ichichinja. Mazhinji emakambani anoona zvichioma kubata nemamiriro ezvinhu aya. Nekudaro, isu takaisa pasi mamwe matanho anogona kukubatsira iwe kusangana nezvinoshanduka-shanduka zvinodiwa nekambani yako.
Enda Pamusoro Pako Bhizinesi Zvinangwa
Sezvo zvido zvako zvevashandi zvichichinja, panofanira kunge paine chikonzero chiri shure kwayo. Ichi chikonzero chine chekuita nezvako bhizimisi zvinangwa. Kunyangwe ikasadaro, inofanirwa kunge yakabatana neyako bhizimisi zvinangwa. Zvaizobatsira kana iwe ukavapfuura usati watumira ads yekuvhura mukambani yako. Zvinangwa izvi zvinogona kuve zvenguva pfupi uye kwenguva refu senge -
Kukura kuburikidza nekutora.
Kuwedzera muzvikamu zvitsva.
Kutanga chigadzirwa / sevhisi nyowani.
Izvo zvakakosha kuti uverenge izvi bhizimisi zvinangwa zvekuzviyeuchidza kuti vashandi vako vachazoshanda kuti vazviite. Saka, wako bhizimisi zvinangwa uye zvinodiwa nevashandi zvakanyatsopindirana. Kana ukasazvienzanisa usati wahaya vanhu vakawanda kana kumisa varipo, hausi kuzoona kufambira mberi. Chengetedza musoro wako wakananga pane chinangwa uye ita zvese zvinoenderana nazvo.
Tora Tarisa kune Yako Yazvino Vashandi
Zvino zvauri kuziva zvaunoda kuwana (yako bhizimisi zvinangwa), inguva yekuti iwe utarise zvaunazvo (vashandi vako varipo). Iwe unofanirwa kuve nekunzwisisa kune vanhu varikushandira iwe.
Izvi zvinokubatsira iwe kuziva hunyanzvi hwaunoda kunzvimbo yako yebasa uye ndeapi vashandi varipo vanokodzera kukwidziridzwa. Iwe unozogona kuve nemufananidzo wakajeka wekuti zvipi zvinzvimbo zvinofanirwa kuzadzwa. Kana iwe ukatora rubatsiro rweanyanzvi senge Denver yevashandi agency, iwe unogona kuwana rubatsiro rwese rwaunoda neako anochinja-chinja evashandisi zvinodiwa. Ndatenda isu gare gare!
Uyai Nemaitiro Emushandi
Nzira iri nyore yekuronga yako evashandi zvinodiwa ndeyekutarisa maitiro evashandi kukambani yako. Isu hatisi kutaura nezve maitiro maitiro pano. Panzvimbo iyoyo, isu tiri kuratidza iyo yekusiya-kutora mapatani ayo ari kuenda kunotsamwisa iko kwevashandi zvinodiwa kunzvimbo yako yebasa.
Pane zvakakosha Software iripo mazuva ano iyo inounganidza akati wandei mishumo ine data nezve vanhu vari kufamba marefu uye mapfupi mashizha uye vanhu vava kuda kuenda pamudyandigere. Kuita izvi kucharatidza zvinzvimbo zvaunoda kuzadza kuti basa rekambani yako rienderere mberi. Kana ukasaita izvi, gadzirira kutarisana nekurasikirwa kwakanyanya.
Rega Vanhu Vazive Pane Zororo
Mushure mekuziva nguva uye vanhu vangani vaunoda kukambani yako, unogona kusvika padanho rino. Zvinoda kuti iwe uudze vanhu kuti pane chinzvimbo mukambani yako. Iyi ndiyo chete nzira yekukoka vanhu kubvunzurudzo.
Nekudaro, iwe ungangoda kuve wakangwara nezvekuti iwe unoshambadza sei nzvimbo. Izvi zvakakosha nekuti kudhiraina chiitiko chiri kuenderera, uye zvinotora nguva nemari. Iwe haugone kushandisa mari yakawandisa pane vanhu vari kuzongokushandira kwenguva pfupi. Tora rubatsiro rwekushambadzira uye nevamiriri vevashandi kana kusunda kuchisvika.
Kutanga Kubvunzurudza Vadzidzi
Iyi nhanho ndiyo inoonekwa nevanhu sedanho rekutanga revashandi. Kutaura chokwadi, ndizvo. Iwe wadarika nematanho ese kumusoro kuti usvike pane ino. Saka, makorokoto. Zvinoda kuti iwe utange kubvunzurudza vavhoterwa. Imwe tipi iyo ichakubatsira iwe - ita kuti ikurumidze uye nyore.
Sezvo zvido zvako zvevashandi zviri kuchinja, iwe unofanirwa kutarisa pamibvunzo yakakosha seiyi - "Kangani kawakarasikirwa neshifti yako" uye "Wakavafukidza sei." Iyi ndiyo mibvunzo inokosha, uye inofanirwa kugadziriswa zvine kukosha kwakaringana.
Ronga kwenguva refu yevashandi kare
Pakarepo mushure mekunge waita hanya nezvaunoda iye zvino zvevashandi, unofanirwa kufunga nezve chirongwa chenguva refu chevashandi zvakare. Izvo zvinongo chengetedza iwe nguva nesimba. Inogona kuve ipfupi segore rimwe uye zvakare ingave yakareba semakore gumi. Zvese zvinoenderana nesaizi yekambani yako.
Kukwezva vashandi kunzvimbo yavo yebasa
Izvo zvakakosha kuti uite vashandi vako kuti iwe uite kuti ushandire iwe. Kana iwe usinganzwisise izvi, funga nezvazvo kubva pamaonero evashandi. Iwe unozogona here kushanda panzvimbo isina kugadzikana uye isingazombobvuma kuedza kwako? Mhinduro yakajeka ndeye - Kwete. Iyo haina kana kana chekuita nemari. Icho chinhu chepfungwa.
Saka, shanda paari mushandirwi nehukama hwevashandi kubasa kwako. Ita kuti mushandi wese anzwe kubatanidzwa uye kukurudzirwa. Izvi zvinowedzera mashandiro avo, uye mushandi wese achave anobatsira kusangano nenzira yaro chaiyo.
Ramba uchitaurirana nepurogiramu yako yevashandi
Sezvatakambotaura kare, kuuya nehurongwa hwevashandi kunobatsira kukambani, kugara uchitaurirana neizvo zvichave zviri nani. Izvi imhaka yekuti vanhu vari kugara vachichinja. Ivo vanochinja maitiro nguva nenguva. Iwe unofanirwa kunge uchienderana-navo.